Rafi-pamonjàna Mahafaty Ao Brezila Sy Ny Mpamazivazy Ao Amin’ny Aterineto Mankasitraka Izany · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i John Razen
Voadika ny 25 Marsa 2017 9:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Español, Português
Nitombo 161 isanjato ny mponina ao amin'ny fonjan'i Brezila teo anelanelan'ny taona 2000 sy 2014. Sary: Pikantsary tamin'ny lahatsary fanadihadian'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona “Brezila: Ny mpiara-migadra no mamelona ny Fampisehoana”
Miaina krizy mbola tsy nisy toy izany amin'ny rafi-pamonjàny i Brezila ankehitriny. Tao anatin'ny tapa-bolana monja izay tamin'ity taona ity, niteraka fahafatesana maherin'ny 130 ny fitroarana tao amin'ireo fonja manerana ny fanjakana valo. Tsy ny herisetra amin'ny rafi-pamonjàna ihany no nahasarika ny saina tamin'ny toe-javatra fa nanasongadina ny ampaham-peon'ny fiarahamonina Breziliana mankasitraka ny fandatsahan-drà koa izany.
Araka ny voalazan'ny gazety El País, ny vono olona vao haingana tao amin'ny fonja Breziliana dia vokatry ny firodanan'ny “dinan'ny fandriampahalemana” izay nisy nandritra ny roa am-polony taona teo amin'ireo andian-jiolahy roa matanjaka indrindra ao amin'ny firenena: ny Primeiro Comando da Capital (PCC, Komandao Voalohan'ny Renivohitra ), manana ny foibeny ao São Paulo, sy ny Comando Vermelho (CV, Komandao Mena), ao Rio de Janeiro. Mba hanehoana ny mampaharatsy kokoa ny toe-draharaha, samy manana andian-jiolahy kely isam-paritra ireo andian-jiolahy ireo.
Tamin'ny 1 Janoary, gadra enina amby efapolo no maty novonoina tao amin'ny Fonjan'i Anísio Jobim, ao Manaus. Mpikambana ao amin'ny PCC ny ankamaroan'ireo namoy ny ainy, izay notafihan'ny vondrona ao an-toerana Familia do Norte (FDN, Fianakavian'ny Avaratra) ny fanjakazakan'ny PCC. Nandritra ny volana Janoary, nisy ny fanafihana tahaka izany nitranga manerana an'i Brezila.
Ankoatra ny fifehezana ny fitaovam-piadiana sy ny trafikan-drongony ao amin'ny faritra lehibe an-drenivohitra ao Brezila, nametraka ny tenan'izy ireo ho mpitantana tsy ofisialy ireo fonja ao amin'ny firenena ny CV sy ny PCC, izay niforona tao anatin'ny fonja tamin'ny taona 1970 sy 1990 avy. Nandritra ny 20 taona, niaro ny fandriampahalemana efa marefo ny fifanarahana teo amin'ny vondrona roa tonta, nampihena ny vono olona tao amin'ny tanàna maromaro
Tamin'ny herintaona, toa rava ny fampiatoana ady, ary lasa sehatr’ ady ny fonja Breziliana nanomboka teo.
Efa mahazatra eo amin'ireo mpitandro ny filaminana Breziliana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, anisan'izany ny fampijaliana sy ny famonoana ho faty tsy ara-dalàna (ivelan'ny fitsarana). Mampatahotra ao amin'ny manodidina ny tanàn-dehibe hatramin'ny taona 1990 ny vono olona ataon'ireo polisy. Tamin'ny taona 2015, namariparitra ny rafi-pamonjàna Breziliana ho “loza manoloana ‘ny zon'olombelona” ny tatitra avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena Mpanaramaso ny Zon'Olombelona (HRW).
Mahery setra tahaka ny rafi-pamonjàna, ary manana mpanohana marobe ao Brezila izany. Nivoatra tao amin'ny media mahazatra sy ny media sosialy ny teny tafahoatra ampisain'ny sanga ara-politika. Ny sasany amin'izao fotoana izao, manohana mivantana ny “famonoana” ireo olona sokajiana fa “tsy ilaina” ara-piarahamonina. Ary tian'izy ireo ho anisan'ny politika ofisialin'ny governemanta momba ny fiarovana anatiny izany.
Nandritra ny firongatry ny herisetra am-ponja vao haingana, namoaka kajikajy mandahatra ireo fonja arakaraka ny fahafatesana tamin'ny fitroarana tao amin'izy ireo, ary miantso izany hoe “Ligy Tompondakan'ny Lalao Manafay” ny pejy Facebook Direita ao Vivo (Mivantana eo noho eo). Ny laharana voalohany dia azon'ny Fonja Karandiru, izay efa mihidy ankehitriny ao São Paulo, toerana nisian'ny vono olona lehibe indrindra tany am-ponja teo amin'ny tantara Breziliana, izay namonoan'ny ny polisy ho faty gadra miisa 111 tamin'ny taona 1992. Manesoeso sy mankalaza ny ady eo amin'ireo andian-jiolahy roa ao amin'ny firenena ny Direita ao Vivo, mampitaha izany amin'ny lalao, raha mametraka fanehoan-kevitra midera ireo fahafatesana marobe kosa ireo mpamandrika ao aminy.
Direita ao Vivo's “Ligin'ny Tompon-dakan'ny Lalao Manafay.” Sary: Facebook
Ary marobe ireo mpananihany ao amin'ny aterineto mankasitraka am-pamazivaziana ny fandripahana ireo olona voafonja. Marcela Tavares, malaza ao amin'ny YouTube, manana mpanjohy mihoatra ny 400 000 ohatra nanolo-kevitra ny hanoloana ny dika Breziliana amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra «Big Brother» amin'ny zavatra antsoina hoe “Big Brother Bandit“, milaza fa tokony alefan'ny fonja amin'ny fahitalavitra ny vono olona ataon'izy ireo mba ho fialam-boly any an-trano. Amin'ny fiafaran'ny lahatsary, nilaza tamin'ireo mpanjohy azy tamin'ny fomba manjavozavo izy hoe, “Iza no milaza fa mivazivazy aho?”
Tsy irery ireo mpanao hatsikana ao amin'ny aterineto tamin'ny fanohanana ny herisetra mihatra amin'ireo gadra ao amin'ny fonjan'i Brezila. Nilaza tamin'ny resadresaka iray ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanora, Bruno Júlio, fa: “Tokony ho maro kokoa ireo fahafatesana. Tokony ho maro ireo fahafatesana isaky ny herinandro”. Noterena hametra-pialàna izy nony farany, saingy nirongatra tao amin'ny Facebook ny fankatoavana avy amin'ireo mpanohana.
Sanganehana ihany koa ilay solombavambahoaka Major Olímpio raha namoaka ny fanisana ny fahafatesana, manondro ny fonja Gericinó ao Bangu.
Olímpio dia ao anatin'ny Kongresim-pirenena antsoina hoe “balan'ny Komitim-pifidianana”, firaisan’ ireo depioté kaonservativa miaro ny fanomezana fitaovam-piadiana ho an'ny vahoaka sy mampiroborobo ny fahefan'ny polisim-panjakana.
Raha mikasika ny fonjan'i Brezila indray, miha lian-drà hatrany nandritra ny taona maro ny kabarim-pirenena. Manoloana ny rafi-pamonjàna ao anatin'ny korontana ankehitriny, mandrisika ny herisetra ankehitriny ireo manampahefam-panjakana sy ny mpiserasera aterineto sasany, mankasitraka izany ho “fanadiovana” ilaina. Henjana kokoa amin'izao fotoana izao ny sazy ho an'ny heloka bevava. Marobe ireo heloka bevava ao anatin'ny boky, ary lava kokoa tsy mbola nisy toy izany ny faharetan'ny fanagadrana.
Miaraka amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina, miteraka karazana “fandrendreham-bahoaka amin'ny famaizana” ity famoretana ity izay nampitombo ny isan'ny gadra tsy araka ny isa zakany.
Araka ny filazan'ny Rafi-baovao Momba Ny Fonja (Infopen), ivontoeram-pikarohana ao anatin'ny Minisiteran'ny Fitsarana ao Brezila, nitombo 161% teo anelanelan'ny taona 2000 sy 2014 ny mponina any am-ponja, mahatonga azy ho laharana faha-efatra lehibe indrindra manerantany. Ny zava-misy mampiahiahy ihany koa dia eo amin'ny 40 isanjaton'ireo gadra ireo no mbola tsy nandalo fitsarana.
Na dia eo aza ny fitomboan'ny asan'ny polisy sy ny fanagadrana, mbola manaka-danitra ny tahan'ny heloka bevava ao Brezila. Raha ny marina, mitàna ny laharana faha-11, taha ambony indrindra amin'ny vono olona manerantany ny firenena, izay vono olona eo amin'ny 32,4 isaky ny mponina 100 000. Ary mety niteraka ny fitomboan'ny andian-jiolahy izay ivon'ity krizy ankehitriny ity ny korontana eny amin'ny fonja Breziliana.